मन्त्रीको काम नै रिबन काट्ने र बत्ती बाल्ने भएपछि के को समृद्धि ? - Sidha News
मन्त्रीको काम नै रिबन काट्ने र बत्ती बाल्ने भएपछि के को समृद्धि ?
नेकपामा जुझारु युवा नेता एवम गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारी प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । मुलुक बनाउने यति ठूलो अवसर भएकाबेला अझैपनि मन्त्रीहरु रिबन काटन् र वत्ति बाल्नमै व्यस्त हुन थालेपछि उनी आक्रोशित भएका हुन् ।
सांसद पहारी भन्छन्, ‘विकासका योजना र जनताका समस्या समाधानका उपाय खोज्न मन्त्रीहरुको समय माग्दा पाइदैन । पिएले भन्छन्– मन्त्री ज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ । पछि यसो हेर्दा त मन्त्रीको दिनभरको कार्यक्रम नै रिबन काट्ने र वत्ति बाल्ने मात्र हुँदो रहेछ । यसरी आउँछ समृद्धि ? ’
प्रधानमन्त्री केपी ओली विकास प्रेमी नेता हुन् । उनले मुलुकलाई विकासको मार्गमा लैजान ठूलाठूला योजना अघि सारेका छन् । काम पनि प्रशस्त भैरहेका छन् । तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’ समात्न सकेनन् । यसकारण विकासमा फड्को मार्ने गति केही सुस्त देखिएको मात्र हो ।
अनेकौं प्रतिकुलताकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आवश्यक समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छन् । उनीमाथि शंका उपशंका गर्न आवश्यक छैन ।
नविना र रञ्जितलाई सुझाव
पार्टी एकीकरणकाक्रममा जनवर्गिय संगठनहरुको समायोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । राजनीतिमा बिभिन्न उतारचढाव आइरहने भएकाले नविना लामा, रञ्जित तामाङ तथा रमेश पौडेलहरुले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले धेरै सोचबिचार गरी एकता सम्पन्न गरेकाले अब यसमा विवाद ल्याउन उपयुक्त छैन ।
पोखरा आउनेलाई सहुलियत
पोखरालाई पर्यटकीय नगरीकारुपमा अझै विकसित गर्न योजनाबद्धरुपमा काम भैरहेको छ । पोखरा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएपनि केही समययता यहाँको सौन्दर्य हराउँदै गएको छ ।
ठूला तालहरु पोखरीमा रुपान्तरण हुँदैछन्, सेता हिमाल काला हुँदैछन्, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्, फोहोर मैला पनि बढ्न थालेको छ । यस्ता थुप्रै समस्या देखिन थालेका छन् । यसका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै विशेष योजनाकासाथ गम्भीर भएर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, पोखरा पर्यटकीय नगरी रहने छैन ।
पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खर्चमा सहुलियत दिनुपर्छ । हामी हवाइ तथा सडक यातायात मात्र होइन होटेल र पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणकाक्रममा लाग्ने शूुल्कमा पनि बिचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । यो मुद्दा मैले संसदमा पनि लगातार उठाइरहेको छु ।
फेवाताललाई १५ अर्ब
२२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल अहिले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सिमित भएको छ । माथिबाट पहिरो आएर पोखरा पूरिदै गएको छ । यसको क्षेत्रफल मात्र होइन गहिराई पनि घट्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ फेवाताल वरिपरि बनेका अवैध संरचनाले फेवातालमाथि अतिक्रमण डरलाग्दो रुपमा बढाएको छ । कर्ण शाक्य लगायत थुप्रै व्यक्ति अतिक्रमण गर्नेमा परेका छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गर्ने सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको छ, तर काम हुन सकेको छैन ।
नेता पहारी भन्छन्, ‘ कि सर्वोच्चको आदेश अनुसार सम्वन्धित निकायले ती अवैध संरचना हटाउनु पर्यो, नसक्ने भए सक्ने अरु कसलाई त्यो काम दिन पर्यो । अझ मलाई जिम्मा दिने हो भने त म पूर्णरुपम काम सफल पार्न सक्छु । ’
‘प्रदेश सरकारका केही मन्त्री पूरिदै गएको फेवातालको बिचमा टापु बनाएर १०० डलर प्रतिकप कफी बेच्छु भन्छन् । ताल संरक्षण गर्ने कि सरकारले सम्पदा मासेर ब्यापार गर्ने ? यस्तो मानसिकताले कसरी हुन्छ ?’ पहारीको प्रश्न छ ।
रमा थपलिया : म सन्तोष पन्तकी श्रीमती होइन !
गृहमन्त्रालय जसपाले सम्हाल्ने गरी सरकारमा सहभागी हुनेछः जसपा नेता राजीव झा
संसद छैन, एमसीसी अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाँदैछौं : राजदूत डा. खतिवडा
अक्सिजन बाँड्ने काम सांसदको होइन, भोलि सांसदले मै उपचार गर्छु भने के गर्ने ?
उपेन्द्रजीले राम्रो काम गर्नुभएन : राजेन्द्र महतो
‘संघीयता चाहिँदैन, राजतन्त्र नफर्की मुलुक बन्दैन’ – नेता लिङ्देन
रियलमै बच्चा पाउँदै रक्षा, जिग्रीले खुलाउँदै भने- म बाऊ होइन (भिडियो)